China sere robot HY1010A-143 Emeputa na Supplier | Yunhua
HY1010A-143 bụ 6 axis sere robot, nke a na-etinyere na spraying nke obere na ọkara-sized akụkụ dị iche iche ọrụ na-enye ndị ahịa na akụ na ụba, ọkachamara, elu àgwà spraying ngwọta. Ọ nwere àgwà ọma nke obere ahụ, ngbanwe dị mma na ntụgharị, oke nkenke, obere oge. HY1010A-143 nwere ike itinye ya na usoro nke inyeaka ngwa ngwa dịka turntable, okpokoro okpokoro na usoro ihe eji ebu ihe. Maka nkwụsi ike ya na nhazi nke teknụzụ eserese, HY1010A-143 nwere ike ịchekwa agba ahụ ma melite ogo mgbake nke agba.
HY1010A-143 kwadebere ya ngwa ngwa ọhụụ na-agba agba, nwere ikike nkwado asụsụ dị iche iche, na-enye njikwa ihu igwe na-eji arụmọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na teknụzụ. Ndị ọrụ nwere ike ịkụzi aka ma ọ bụ isi ihe iji gosi ọnụọgụ iji nweta nkuzi, ọrụ dị mfe na ngwa ngwa
Axis MAWL Ọnọdụ nkwughachi Ike ikike Ebe ọrụ Oke ibu Ntinye IP ọkwa
6 10KG ± 0.06mm 3KVA 0-45 ℃ 170KG ala IP54 / IP65 (úkwù)
Akụkụ ihe J1 J2 J3 J4 J5 J6
± 170 Celsius + 85 Celsius ~ -125 Celsius + 85 Celsius ~ -78 Celsius ± 170 Celsius + 115-140 Celsius ± 360 Celsius
Oke ọsọ 180 Celsius / s 133 Celsius / s 140 Celsius / s 217 Celsius / s 172 Celsius / s 172 Celsius / s
Q1.Can ị na-enye mgbochi bọmbụ na-ese ihe robot?
A. Na China, enweghi akara ọ bụla nwere ike ị nweta mgbochi robot. Ọ bụrụ na ị na-eji mgbanaka ndị China maka eserese, a ga-eyi uwe mgbochi na-enweghị ike iyi ya na robot nwere ike ịmegharị ụzọ na ntinye ma ọ bụ akara ngosi na igwe eserese.
Q2.What bụ Anti-static uwe? Nwere ike ibute?
A. Anti-static uwe bụ nke nwere ike igbochi static ọkụ eletrik. N'oge a na-ese ihe, enwere ike ụfọdụ ọnọdụ dị ka ọkụ nke ga-ebute ọkụ, ụdị uwe a nwere ike igbochi ọkụ.
Q3.Can ị wụnye nyocha ọhụụ na eserese robot?
A. Maka ngwa dị mfe, ọ dị mma maka nyocha ọhụụ.
Q4.Can ị na-enye ngwọta zuru ezu maka itinye ihe osise?
A. Mgbe mgbe, onye na - ahụ maka anyị ga - eme nke ahụ, maka anyị, onye na - emepụta robot, anyị nwere ike ịnye igwe eserese na robot ejikọtara, naanị ị ga - ebugharị robot na ụzọ gị. Ma nye otu azịza esi esi nweta ngwaahịa a.
Q5.Can ị nwere ike igosi anyị ụfọdụ vidiyo banyere ngwa eserese?
A. Chọpụta, ị nwere ike ịga na Youtube ọwa anyị, enwere ọtụtụ vidiyo
Nke gara aga: Ihe osise robot HY1050A-200
Osote: Na-adọnye na ibudata robot HY1020A-200